बिगब्यासमा आज चौथो खेल खेल्दै सन्दिप लामिछाने, कुन टिमबिरुद्ध, कति बजे, कसरी हेर्ने लाईभ ? सम्पुर्ण जानकारी |
२०७७, ५ माघ सोमबार १०:४० January 18, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौं, ५ माघ : नेपाली स्टार स्पिनर सन्दिप लामिछाने आबद्ध होबार्ट हरिकेन्सले अष्ट्रेलियामा जारी बिग बास लिग (बीबीएल)मा आज सिड्नी थन्डरसँग खेल्दैछन् । सन्दीपले यो सिजन टोलीका लागि चार खेल मात्र खेलेका छन् जसमध्ये पछिल्ला तीन खेलमा हुरिकेन्स पराजित भएको छ।
यो पनि पढ्नुस् : बिदेशी लिगमा चल्न छोड्यो सन्दिपको जादु ! किन खस्कियो सन्दिपको प्रदर्शन ?
कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि सन्दीपले हुरिकेन्सका सुरुका ६ खेल गुमाएका थिए। ती खेलमा हुरिकेन्सले चार जित र दुई हारको नतिजा निकालेको थियो। होबर्टले अब पहिलो चरणमा चार खेल खेल्न बाँकी छ। यी खेलको नतिजाले उ शीर्ष चार भित्र रहने नरहने निर्क्योल हुने छ।
सन्दीप आजको सिड्नी थन्डर बिरुद्धको खेलमा पनि प्लेइङ-११ मा पर्ने पक्का छ । उनी आइतबार घोषणा गरिएको १५ सदस्यीय टोलीमा पनि अटाएका थिए । होबार्टले जारी सिजनमा १० म्याच खेल्दा ५ मा जित र ५ खेलमा हारेका सामना गरेको छ । होबार्ट तालिकामा १९ अंकका साथ सातौँ स्थामना छ ।
यो पनि पढ्नुस् : बधाई ! भारतिय कप्तान किङ कोहलीले बनाए अहिलसम्मकै ठुलो रेकर्ड, रेकर्ड थाह पाउँदा सबै चकित
त्यस्तै, सिड्नीले १० मध्ये ६ खेलमा जित हासिल गरेको छ । सिड्नी २३ अंकका साथ तालिकको दोस्रो स्थानमा छ । पछिल्ला पाँच म्याचको तुलाना गर्ने हो भने सिड्नीविरुद्ध होबार्ट एक खेलमा मात्र विजयी भएको छ ।
सिड्नी थन्डर र होबार्ट हुरिकेन्स बीचको यो खेलको नेपालमा सोनी सिक्स तथा सोनी टेन २ बाट प्रतक्ष्य प्रसारण हुनेछ । साथै सोनी लिभको मोबाईल एपबाट समेत लाईभ हेर्न सकिनेछ । खेल नेपाली समयअनुसार आज दिउँसो २ बजेदेखि सुरु हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुस् : युजवेंद्र चहलकी श्रीमती धनश्री वर्माको ह’ट डान्स देखेर फ्यानले टोके जिब्रो ( हेर्नुस भिडियो )
होबार्टको सम्भावित प्लेइङ-११ : बेन म्याकडर्मोट (विकेटकीपर), डार्सी सर्ट, डेविड मलान, पीटर ह्यान्सकम्ब (कप्तान), कोलिन इन्ग्राम, टिम डेविड, स्कट बोल्याण्ड, नाथन एलिस, रिले मेरीडिथ, सन्दीप लामिछाने र विल पार्कर ।